Yen Kuti US dhora Gengi nhoroondo (2022)
Yen Kuti US dhora Gengi nhoroondo inhoroondo 1992 kusvikira 2022. Currency kupinduka chati Yen Kuti US dhora (2022).
Isu tinochengeta nhoroondo yemamwe manhamba ekutsinhana kwemari yese gore rega. Nhoroondo yemamwe manhamba ekutsinhana kwezuva chero ripi neripi uye gore ripi raungawana nesu. Nhoroondo yese ye Yen kusvika US dhora chiyero chekutsinhana gore rega rega. Makotesheni ese e Yen kusvika ku US dhora kubva 1992 kusvika 2022 ari pano. Exchange rate munguva yakapfuura, kwegore rega rega.
Pane girafu yenhoroondo yemari yekutsinhana kwe Yen kusvika US dhora, iwe unogona kuona iyo nhoroondo refu yekuchinja mukukosha kwemari. Girafu yenhoroondo ye Yen ku US dhora kubvira 1992 paine chirevo chegore rega rega. Girafu yemahara yenhoroondo ye Yen ku US dhora pagore rapfuura. Unogona kuwana chaicho Yen chiyero pane chati kana iwe ukafamba pamusoro pezuva rakasarudzwa. Iyo yekuchinjana mitengo nhoroondo ine inofambidzana inokurudzira. Hover pamusoro pegirafu.
Pindura Yen Kuti US dhora Yen Kuti US dhora Exchange zvazvingava Yen Kuti US dhora kugara Forex Exchange musika
Chikumi 2022 0.007800
Chivabvu 2022 0.007698
Kubvumbi 2022 0.008192
Kurume 2022 0.008655
Kukadzi 2022 0.008668
Ndira 2022 0.008683
Nhoroondo ye Yen kusvika US dhora mitengo yekutsinhana inowanikwa mu tafura yegore rega rega kubvira 1992. Nhoroondo Mamero ekutsinhanisa e Yen kusvika ku US dhora iri patafura yegore rega rega. Aya Yen kusvika ku US dhora mwero wekutsinhana mutafura yegore rega rega wakasununguka pano. Makota emwedzi nemwedzi e Yen ku US dhora, unogona kuona kana iwe ukacheka panongedzo yegore mune iyo tafura yenhoroondo yegore. Nhoroondo ye Yen mwero wekutsinhana kwegore ripi zvaro rakasarudzwa rinowanikwa mahara kana iwe ukacheka pane chinongedzo chegore mune iyo tafura nhoroondo tafura.
Shanduko yemhando yekutsinhana kupfuura yenguva yakareba inooneka zvakajeka pane peji redu pane nhoroondo yemari yekutsinhana. Shanduko mumitengo yekutsinhanisa kwe Yen kusvika ku US dhora kwenguva yakareba inoonekwa zvakajeka pane ino peji renhoroondo yemitengo yekutsinhana. . Iko kusimuka uye kudonha kwe Yen kusvika ku US dhora kubvira 1992. Pane yedu saiti kune nhoroondo yemitengo yemari yese yakabatana kune vese.
Mune yedu database iwe unogona kuona nhoroondo ye chero mari kune chero imwe imwe makore apfuura. Nhoroondo yepamhepo yekutengesa kwemari imwe kune imwe kwemakore ese ari pano. Yen kusvika ku US dhora for 1992, 1993, 1994, 1995, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Dzvanya pagore riri patafura kuti uone nhoroondo ye Yen ku US dhora.